Kenya waxay bartilmaameedsaneysaa Dalxiiska Afrika si loo yareeyo Saameynta COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Kenya » Kenya waxay bartilmaameedsaneysaa Dalxiiska Afrika si loo yareeyo Saameynta COVID-19
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Wararka Kenya • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Guddiga Dalxiiska Kenya wuxuu xoojinayaa dadaallada loogu suuqgeynayo Kenya inteeda kale Afrika iyadoo la beegsanayo suuqyada muhiimka ah ee laga helo gobolka Afrika.
Kenya waxay xarun u ahayd suuqyada Bariga iyo Bartamaha Afrika, waxayna ku tiirsaneyd adeegyadeeda hawadeed ee adag iyo heerarka soo dhoweynta ee sare.
Gudiga Dalxiiska Kenya ayaa kulan ay la qaateen usbuucii la soo dhaafey hawl-wadeenada dalxiiska ee Uganda, Rwanda iyo Ethiopia ku qabtay magaalo xeebeedka dalxiiska ee Mombasa.
Dalxiiska Afrika waxaa lagu qiimeeyaa inuu yahay suuqa ugu koritaanka badan adduunka, iyadoo khubarada arrimaha socdaalku ay u arkeen tirada dalxiiska qaaradda inay korodhay heer ah 8.6%.
Iyada oo wax laga maal-galiyo suuqa dalxiiska Afrika ee hodanka ah ee aan wali la faafin, Kenya waxay hadda qaadeysaa dadaallo culus oo ay ku soo jiidaneyso dalxiisayaasha dalalka kale ee Afrika, iyada oo ujeedkeedu yahay in ay soo dadajiso soo kabashada dalxiiska ka dib hoos u dhac uu ku yimid COVID-19 aafada.
Guddiga Dalxiiska Kenya (KTB) ayaa bishii la soo dhaafay xoojiyay dadaallada loogu suuqgeynayo Kenya inteeda kale Afrika iyada oo la beegsanayo suuqyada muhiimka u ah ilaha gobolka Afrika.
Waxay hodan ku tahay duurjoogta, taariikh dhaqameedyada, dhaqanka iyo dhaqanka, Kenya waxay ka mid tahay wadamada Afrikaanka ah ee ay ku dhacday COVID-19 saameyn balaaran oo laga arkay hoos u dhaca soo-galootiga ka imanaya ilaha muhiimka ah ee suuqyada Yurub iyo Mareykanka.
Kenya waxay xarun u ahayd dalxiisyada suuqyada Bariga iyo Bartamaha Afrika, iyadoo ku tiirsan adeegyadeeda hawadeed ee adag iyo heerarka soo dhoweynta sare ee dalxiisayaasha marka loo eego dalalka kale ee Bariga iyo Bartamaha Afrika.
Iyada oo ka faa'iideysaneysa adeegyadeeda hawada sare ee horumarsan, hudheellada iyo xarumaha hoyga leh ee dalxiiska iyo saldhigga safarka, Kenya waxay hadda bartilmaameedsaneysaa booqdayaasha Afrika si ay u buuxiyaan una buuxiyaan farqiga ka dhashay hoos u dhaca dalxiiska caalamiga.
Gudiga Dalxiiska Kenya (KTB) ayaa dhawaan shaaciyay in suuq geynta Kenya oo ah goob soo jiidasho leh oo loogu tala galay booqdayaasha qaarada intiisa kale la xoojiyay ka dib markii la fududeeyay xayiraadaha safarka ee COVID-19 ee dhowr dowladood oo Afrikaan ah.
Maamulaha KTB Corporate Affairs Affairs Wausi Walya ayaa sheegay in ay jiraan fursado dalxiis iyo safar oo aad u balaaran oo ka jira gobolka Bariga Afrika iyo suuqa Afrika oo Gudiga loo qoondeeyay in lagu qabto iyada oo loo marayo barnaamijyo kala duwan oo ay ku jiraan warbaahinta.
Guddigu wuxuu dhammaadkii usbuucii la soo dhaafay kulan la yeeshay hawl-wadeennada dalxiiska ee ka socda dalalka Uganda, Rwanda iyo Itoobiya oo ku yaal magaalo xeebeedka dalxiiska ee Mombasa.
Kenya waxay qabanqaabin doontaa safarro kala duwan oo loogu talagalay dadka ka shaqeeya dalxiiska Afrika si ay u ogaadaan meelaha dalxiiska u dalxiiska badan, oo ay ku jiraan xeebaha xeebta, meelaha duurjoogta lagu xanaaneeyo iyo goobaha qadiimiga ah, ayuu yiri Walya.
"Kenya waxay u aragtaa suuqa dalxiiska Afrika inuu yahay mid istiraatiiji ah, iyadoo Uganda ay hogaamineyso tirada booqdayaasha dalkan", ayay tiri.
Dhaqdhaqaaqyada ay haatan sameyneyso KTB waxay kordhin doontaa dadka imanaya dalxiiska xilligan oo dalxiiskii adduunku uu la ciir ciirayo waxyeellada cudurka faafa ee COVID-19.
Guddigu wuxuu kaloo qorsheynayaa inuu martigaliyo safarro isbarasho ah oo ku tagaya dhowr goobood oo soo jiidasho leh oo ku yaal Kenya, ujeeddadiisuna tahay inay ku qanciyaan ganacsiga safarka inay soo tijaabiyaan halka ay ku wajahan tahay Kenya dalxiiskeeda ballaaran ee ay ku soo jiidan karto suuqyada gobolka iyo kuwa Afrika.
Xaflad is biirsaday oo qaas ah ayaa loo abaabulay 15 ka mid ah safarada iyo dalxiisayaasha ka kala socda wadamada Uganda, Rwanda iyo Ethiopia kuwaas oo ku jiray muunad qaadashada wax soo saarka todobaadk ah meelaha caanka ah ee dalxiiska Kenya.
Kooxda howlwadeenada dalxiis ee gobolka ayaa booqday goobaha muhiimka ah ee dalxiiska ee Nairobi, Nanyuki, Maasai Mara, Tsavo, Diani, Malindi iyo Watamu iyagoo u kuur galaya booqashada dalxiis ee kala duwan ee Kenya ay u fidin karto kuwa sameeya safarada Afrika iyo kuwa caalamka.
Dalxiiska Afrika waxaa lagu qiimeeyaa inuu yahay suuqa ugu koritaanka badan adduunka, iyadoo khubarada safarka ay u arkeen tirada dalxiiska qaaradda inay korortay xaddiga 8.6 boqolkiiba sannadihii la soo dhaafay marka la barbar dhigo celceliska adduunka ee toddobo boqolkiiba.
Guddiga Dalxiiska Kenya wuxuu xusay in kor u qaadista dalxiiska Afrika inteeda kale ay isla markaaba horseed u noqon karto abuurista fursado ka jira Aagga Ganacsiga Bilaashka ah ee Qaaradda Afrika (AfCFTA) iyadoo loo baahan yahay in kor loo qaado kobaca iyo iskaashiga u dhexeeya meelaha dalxiiska Afrika tagayo si looga faa’iideysto suurtagalnimada jirta qaaradda.
Tansaaniya iyo Kenya waxay taageereen dhaqdhaqaaqa xorta ah ee socdaallada gobolka iyo kuwa caalamiga ka dib markii madaxweynayaasha labada dowladood ee deriska ah ay ku heshiiyeen in la xoojiyo safarka gobolka iyo isu socodka dadka.
The Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) wuxuu hadda si dhow ula shaqeynayaa dhowr meelood oo Afrikaan ah si loo xoojiyo safarada Afrika dhexdeeda iyadoo loo marayo marinnada dalxiiska gobolka.
Alaabooyinka kobcinta galmada ee aan la fasaxin oo laga soo qaatay...
Perricone MD wuxuu ballaariyaa Hypoallergenic CBD Maqaarka Xasaasiga ah ...
St. Kitts Hadda Waxay Leedahay Sababta Uu Ugu Dabaal Degayo Safarka